Herisetra mahery vaika :: Tanàna may sy vono olona noho ny valifaty • AoRaha
Herisetra mahery vaika Tanàna may sy vono olona noho ny valifaty
Tsy fanafihan-dahalo tsotra fa ahiana ho valifaty no antony nanafihana ny tanànan’i Beombalahy, kaominina Anjomaramaritina, distrikan’i Mandoto, tamin’ny alahady lasa teo. Olona efatra no maty raha fito no naratra, ankoatra ny fahamaizan’ny trano am-polony.
Tsy latsaky ny telopolo sady miandahy miambavy ireo mpanafika, tamin’izany fotoana izany. Manao ny fanarahan-dia sy ny fanenjehana an’ireo olondratsy ny zandary any antoerana, saingy tsy mbola nahazoana tatitra amin’ny mety ho fivoaran’ny fikarohana.
“ Mety ho mifandray tamin’ny fahafatesana dahalo mpangalatra omby avy tany amin’ ny faritra Tsiroanomandidy, herintaona lasa izay, ity fanafihana tany Beombalahy ity”, hoy Rakotorahalahy Modeste, solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Mandoto. Nandray an-tanana sy mikarakara an’ireo mponina niharam-boina izy, nandritra ny fidinany tany an-toerana nijery akaiky ny zava-misy.
Tamin’ny 2 ora maraina, tamin’ny alahady, no tonga tao amin’ny tanànan’i Beombalahy ny andian’olona am-polony izay nanapoaka basy, nandroba sady nandoro trano. Maty voatifitra ny olona efatra: ny vadin’ny lehiben’ny fokontany, ny katekista ary lehilahy sy vehivavy iray. Naratra voatifitra ihany koa ny olona dimy. Olona roa hafa may noho ny firehetan’ny trano. Omby roa ihany kosa no nalain’ireo mpanafika.
Maherin’ny efapolo ny zandary nalefa nanao ny fikarohana, hatramin’ny omaly. Dia an-tongotra an-kilaometatra maro any amin’ny toerana sy vohitra tsy tongan’ny fiara no ataon’izy ireo ary fantatra fa mizotra mankany amin’ny faritra Bongolava.
Fanadinana CEPE tany Mahajanga :: Mpiadina voatery naato noho ny toe-pahasalamany
Tetiandron’ny oniversite :: Hovitaina alohan’ny 2 novambra ny taom-pianarana 2018-2019